Home Wararka DEG DEG: R/W Rooble oo magacaabay wasiir cusub
DEG DEG: R/W Rooble oo magacaabay wasiir cusub
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif u magacaabay Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, xilkaasi oo uu hore iskaga diiday Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar.
Wasiirka cusub, ayaa waxa uu hore usoo noqday Wasiirkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, sidoo kalena waxa uu noqday Ra’iisul-wasaare kuxigeen xilligii xukuumaddii Badbaado Qaran.
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa haawaneysa tan iyo markii uu Wasiirkii hore ee Gaadiidka iyo Duulista Hawada loo soo badalay uu ku gacan seyray booskaas, kadib markii ay arrin hor leh isku khilaafeen Oomaar iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday.
Wasiir Oomaar ayaa dalabka Farmaajo iska diiday isagoo taas sabab u dhigay in dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah, islamarkaana ay beesha Caalamka isha ku heyso xaaladaha dalka, sidoo kalana uusan u bareeri karin in caburin noocaan ah dalka la geliyo.
Khikaafkaas oo xiligaas taagna ayaa Wasiir Oomaar wuxuu u dhoofay dalka Sacuudi Carabiya arrimo dhanka qoyskiisa ah, waxaana maalmo kadib soo baxday in xilkii laga wareejiyey, loona beddelay xil kale, kaasi oo uu iska diiday.
FIFA Arab Cup 2021 – News – Oman see off Somalia...
Detectives rescue Somali woman from hands of kidnappers in $50,000 failed...